Waa maxay sababta aan mar dambe ugu yeeri doonin booliiska? | Saxil News Network
Waa maxay sababta aan mar dambe ugu yeeri doonin booliiska?
James Smith weligii ma jecleen inuu booliska calaaqaad uu la yeesho balse wuxuu markan booliska ugu yeeray iney hubiyaan deriskiisa xaafadda Fort Worth ee magaalada Texas, sababta oo ah waxay ahayd xilli dambe oo habeen ah albaabka guriga jaarka la ahna si aad ah uu u furnaa.
Waxyar kaddib markii ay booliska yimideen wuxuu deriskiisa ka maqlay xabbad dhacayso marka uu soo jaleecay halkii ay xabadda ka dhacdayna wuxuu arkay gabar 28 jir ah oo meyd ah oo uu dhalay ninka ay deriska yihiin.
James Smith wuxuu sheegay inuu carooday wixii intaa ka dambeeyay , uuna ka daalay dilka maalin walba ay boolisku dadka madowga ah u geystaann isaga oo xusuusanaya markasta dilki ay booliska bishi October ay u geysteen gabdhaasi oo lagu magacaabi jiray Atatiana Jefferson
“Dambigan ayaan la noolaanayaa inta noolasheyda ka dhiman”, ayuu yiri. Sababta oo ah isaga ayaa sabab u ahaa iney booliska halkaasi soo gaaraan dhibkaasina ay geystaan.
Qayaastii saacaddu markay ahayd 02:30 taariikhduna ahayd 12-ka bisha Oktober waxaa Smith hurdada ka toosiyey wiil uu adeer u yahay oo u sheegay, albaabka kore ee guriga jaarka la ah inuu furan yahay leyrkana uu shidan yahay xilligan.
Haweeneyda ku nool guriga deriska la ah Yolanda Carr, waxay qabtaa wadna xannuun, marka Smith wuxuu ka walwalay iney deriskiisa wax ku dhaceen marka uu arkay albaabka saqda dhexe furan.
Kaddibna wuxuu wacay booliska wuxuu dalbaday in deriskiisa “waxa ka dhacaya in la hubinyo”, wuxuuna doonayey booliska iney guriga yimaadaan deriskiisana xaaladda iney caadi tahay iyo inkale si ay u hubiyaan.
Habeenkaasi ma uusan ogeyn Carr iney isbitaal ku maqan tahay oo waxaa game iska ciyaarayey gabdheeda iyo wiil ay ayeya u tahay.
Marka ay booliska goobta soo gaarayeen Smith wuxuu taagnaa meel guriga deriska ku aaddan.
Askari lagu magacaabo Aaron Dean oo bistooladdiisa gacanta ku wata ayaa albaabka furan ka galay kaddibna guriga qaybaha uu ka kooban yahay soo maray, qaybaha dambe e guriga markuu gaarayna xabbad ayaa la maqlay.
“Xabadda markay dhacday kaddibna waxaan maqlay gabadhi oo leh ha sii deynina,” ayuu yiri Smith.
“Ilaa ay gabadhi meesha ka qaadaan habeenkii oo dhan halki ayaan taagnaa oo aan waxa socda kala soconayey.”
Kaddibna booliska wadda guriga hormareysay ayey xireen balse nooma sheegin waxa meesha ka dhacay. Waxba maanan ogeyn ilaa aan aragno booliska oo lix saac kaddib meydka qof dumar ah guriga ka soo bixinaya, gabadha la dilayna waxay ahayd Yolanda Carr gabdheeda Atatiana Jefferson.
Labada qoys ee deriska ah in mudda ayey deris yihiin weyna is yaqaaniin waxaana u dhaxeysa wadda yar iyo dhul cagaar ah oo keli ah.
Maalmo ka hor intay ay Atatiana dhiman waxaa meel ku dhow xaafadda ka dhacay shil gaari waxayna ka shaqeyneysa dadka uu shilka ka dhacay sidii ay u caawin lahayd, ayuu yiri Smith uu Atatiana xusuusanaya.
“Hammigeeda wuxuu ahaa iney dhakhtar noqoto, balse hammigeedii ma noqon mid u suuragala oo waa la daba mariyey” ayuu yiri Smith.
Muuqaal laga helay kaameerad askariga uu watay oo dilkeeda kaddib la baahiyey waxay muujineysaa, Askariga lagu magacaabo Aaron Dear oo daaqadda guriga ay Atatiana ku jirtay agmarayo.
“Gacmaha taag, kor u qaad gacmaha!” ayuu ku yiri kaddibna waa uu toogtay. Marka uu daaqadda xabadda uu ka ridayey askarigana waa uu aamusanaa, gabadha marnaba uma sheegin inuu askari yahay.
Aaron Dean shaqada ayaa laga eryey. Waxaana la xiray bisha December isaga oo lagu soo oogay dacwad dil ah, balse dhageysiga dacwadda waxaa dib u riday cudurka safmarka ee coronavirus.
Taliyaha booliska For Worth, Ed Kraus wuxuu sheegay “Runtii inaan wax qiil ah loo hayn sababta ay Atatiana ay nafteeda ku weysay. Xilli uu shir jaraa’id qabtay taliyaha waxaa ka muuqatay murugo aad u weyn uu ku muujinayey sida uu dilka gabadhaasi loo geystay uu uga xun yahay taasoo saameyn weyn u geysatay xiriirka booliska iyo bulshada deegaankaasi ka dhaxeeyo.
James Smith dilka gabadhan loo geystay wuxuu u waayey wax qiil ah. Dilka Atatiana loo geystayna waxay baab’isay kalsoonidii aadka u yareyd uu booliska ku qabay.
“Booliska wax xiriir ah lama lihin sababta oo ah booliska kuma kalsoonaan karno,” ayuu yiri. “Sidaa darteed haddii aan gabi ahaan booliska arrimahooda isaga fogaanno ayaa noo wanaagsan.”
Mr Smith wuxuu sheegay inuu aminsan yahay kiiska Aaron Dean sidi la rabay inaan loo maareyn. Laga billaabo habeenki uu dilka dhacay ilaa iyo hadda ay jirin cid la soo xiriirtay oo ka socota hay’adaha sharciga.
Wuxuuna sheegay inuu rumeysan yahay haddii subaxnimada habeenki uu dilka dhacay warbaahinta uu la hadli lahaa in kiisaka si wanaagsan loo baari lahaa, balse uu aad uga xun yahay gaabiska ku yimid dhageysiga dacwadda kiiskaasi.
Sida ay sheegayaan daraasado madax banaan oo la sameeyey waxay sheegayaan ku dhawaad 1,000 askari iney ka qayb qaateen dilal dad shacab ah loo geystay.
Dadka madowga oo shacabka dalka Mareykanka tira ahaan ka ah 13%, boolisku dadka ay dileen waxay ka yihiin 24%.
Dr Philip Stinson oo ka tirsan Jaamacadda Bowling Green State oo isku soo duway warbixin ku saabsan dilalka ay boolisku geystaan ayaa sheegay markasta oo ay booliska isku dayaan iney fal dambiyeed qof looga shakiyey soo qabtaan iney iyaga laftooda dambiyo ka daran galaan.
Inti u dhaxeysay 2013-2019 kiiaska dilka ee ay boliska geysteen waxaa lagu qayaasay iney ka badan yihiin 7,5000, balse waxaa kiisaskaasi dacwad dil lagu oogay oo keli ah 71 kiis, waxaana dambiga lagu helay 23 oo keli ah.
Xadgudubyada ay booliska si gaar ah ula beegsadaan dadka madowga ahna waxay horseedday qalalaaso dhex mara booliska iyo dadka madowga ee laga tirada badan yahay.
Christopher Lowe 2019-kii waxaa dilay boolis waxaana shaqada loo eryey afar askari oo dilkiisa ku lug lahaa, sanad kaddibna laba ka mid ah shaqooyinkooda ayey dib ugu laabteen.
Laba usbuuc kaddib marki Atatiana la aasay aabbaheed Marquies Jefferson ayaa u geeriyooday wadna xanuun. Iyada oo uu walaakii aaminsan yahay murugta ka soo gaaray dilka gaabdhiisa loo geystay inuu u dhintay.
Xilliga Atatiana la aasay hooyadeed aad ayey u xanuunsaneyd oo uma suuragelin iney aaska ka soo qayb gasho.
XIGASHADA SAWIRKA,JAMES SMITH
Qoraalka sawirka,Gal barkimo oo lagu sawiray sawirrada Yolanda Carr iyo gabadheeda Atatiana
Horraantii bisha June maayarka Fort Worth Besty Price oo warmurtiyeed ka soo saartay dilki loo geystay George Floyd ee ay booliska ku dileen Minneapolis, nasiib darro xataa ma aysan magac dhabin dilka foosha xumaa ee Atatiana looga geystay Fort Worth.
Maanta waxay Yolanda Carr oo ah hooyadi dhashay Atattiana Jefferson waxay weheshaneysaa oo keli sawirradi gabdhadeeda ay u reebtay iyada oo aan weli helin